Kenya: Tondradrano tao Samburu fa nihoa-morona ny ony Ewaso Nyiro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Marsa 2010 8:34 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Français, Italiano, Swahili, русский, English
Tobim-pikarohana STE anaty rano
Nitondraka an'i Samburu faritra avaratr'i Kenya ny fiposahan'ny masoandro'ny alakamisy 4 marsa ny rano ka nandrava trano falafa fandraisana mpizahantany 6, tobim-pikarohana momba ny fiainan'ny (bibidia) ary nahatonga ny olona an'arivony hianika eny ambony tafo na eny ambony hazo. Avy any amin'ny reniranon'i Ewaso Nyiro izay nihoatra ny morony noho ny oram-baventy nanodidina ny tendrombohitra Kenya moa ity rano nitondraka ity.
Nanoratra ny Ewaso Lions blog:
Nisondrotra tokony ho tamin'ny 5 ora maraina teo [4 Marsa] ny reinranon'i Ewaso Nyiro ka nopaohiny ny trano falafa sy ny toby. Niezaka nihazo ny faritra avo ihany ny namanay ao amin'ny Elephant Watch (Jery Elefanta) sy ny Save The Elephants [STE](Vonjeo ny Elefanta) saingy rava ny toby. Hita eny an-tampontrano na eny ambony tafo rehetra eny ny olona miandry vonjy. Nanokana fotoana hanala ireo olona any amin'iny faritra iny ny tafika britanika, ny Tropic Air ary ny hafa.
Nizara ny fampitam-baovao avy amin'ny Vonjeo ny Elefanta izay rava ny tobim-pikarohany i Paula Kahumbu ao amin'ny Bolongana Baraza:
Notairin'ny ekipanay avy any amin'ny tobim-pikarohana izahay fa dibo-drano ny any Samburu! Samburu manontolo no dobo! Nentin'ny rano avokoa ny tranolainay! Potika tanteraka ny tobim-pikarohanay, soa ihany fa avotra avokoa ny ekipanay rehefa nikirazorazo teny ambony hazo sy teny ambony tafo nianjy ny famonjena avy amin'ny angidim-by!
Misy teny ao amin'ny bolongan'i Paula , “fa efa mihena ankehitriny ny haavon'ny rano saingy efa nilaozana avokoa ny toby any Samburu sy any Shaba.” Izany dia ho fitsinjovana ny orana toa mbola hirotsaka. Niteny ny mpamaham-bolongan'i Ewaso Lions, “Ny tena mampatahotra dia ahiana mbola ho be ny rotsak'orana.”
Misy sary – miaraka amin'ny talaho – izay nalefan'ny mpamaham-bolongana Shivani izay any Samburu amin'izao fotoana izao, navoakan'ny The Ewaso Lions. Ny talaho moa dia mandrisika ny olona hanao fanomezana amin'ny alalan'ny bolongana na any amin'ny biraon'izy ireo any Nairobi (ho an'ireo izay any Nairobi ka maniry ny hanolotra sakafo sy akanjo). Namoaka talaho nampiasa ireo saryireo ihany koa ny WildlifeDirect.
Ny iray amin'ireo fahitalavitra Kenyana tsy miankina NTV dia namoaka lahatsary You Tube ahitana ny faharavana.